विद्यालय सञ्चालकलाई स्वास्थ्य प्रवक्ताको चेतावनी : बच्चाको ज्यान गए ज्यानमारामा पर्लान् नि ! Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले गरेको अपिल अस्वीकार गर्दै कसैले विद्यालय खोल्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट कुनै बालबालिकाको ज्यान गए विद्यालय सञ्चालकलाई ज्यानमाराको अभियोग लाग्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘स्कुलमा सङ्क्रमण भएर, बच्चा मरे अनि बिरामी परे भने त्यहाँको प्रिन्सिपलले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले उकेरासँग भने‘ बच्चा मरेर अदालतमा केस पर्यो भने ज्यानमारामा पर्लान् नि।’
बिहीबार मन्त्रालयले १४ जिल्लालाई कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमको सूचीमा राख्दै बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरेको थियो।
सिसिएमसीले कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन दुुई साता विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेपछि मन्त्रालयले अपिल जारी गरेको थियो।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कुल बन्द गर्नु भनिसकेको छ। तलमाथि भए स्कुलले नै बेहोर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले प्रस्ट भनेका छौँ’ गौतमले दाबी गरे।
गौतमले सरकारी होस वा निजी स्कुल त्यहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गराउने जिम्मेवारी त्यसैकै व्यवस्थापकको रहेको मन्त्रालयको नीति रहेको दाबी गरे।
अहिलेको अवस्थामा विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पढाई जारी राख्न गाह्रो पर्ने दाबी गर्दै उनले प्रश्न गरे‘ कुनचाहिँ प्रिन्सिपलले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर स्कुल चलाउन सक्छ। मलाई एउटा भन्दिनु त?’
मन्त्रालयले दसौँ पटक स्कुलहरू बन्द गर भनेर भनिसकेको दाबी गर्दै उनले भने‘स्कुल बन्द गर, स्विमिङ पुल बन्द गर, नाइट क्लब बन्द गर, भिडभाड नगर, जुलुस नगर, आम सभा नगर, भनेर कति चोटि भनी सकियो। फेरी त्यही कुरा भन्नुपर्ने? बन्द नगर्ने, अनि भोलि लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। घुमाइ फिराइ लकडाउनै गर्ने हो? की के हो?’
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक गरिरहेको दाबी समेत गरे। मन्त्रालयले अक्सिजन, भेन्टिलेटर, बेडलगायत सबै तयारी गरिरहेको दाबी गर्दै यसमा मन्त्रालयको मात्रै तयारीले नपुग्ने थप तर्क समेत गरे।
‘मान्छे धमाधम मर्न लागेपछि, अस्पतालमा बेड नपाएपछि अक्सिजन नपाएपछि, अस्पतालका कोरिडोरमा, अस्पताल अगाडी, घरमा, बाटोमा मर्न थाल्छन्। अनि त्यसपछि अप्ठेरो पर्छ’ उनले भने।
उनले बच्चाहरूमा सङ्क्रमण बढी देखिन थालेको बताउँदै अहिले नेपालमा करिब ७० प्रतिशत जतिमा नयाँ भेरियन्ट देखिएको जानकारी दिए।
‘अहिले युके भेरिएन्ट भेटिएको छ। साउथ अफ्रिकाको, ब्राजिलको भेटिएको छैन’ उनले भने।